ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းကိုးကားရန်မှအပအခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့သည့်အထင်ရှားဆုံးဗြိတိသျှအဖြစ်အပျက်တီဗွီအခိုက်အတန့်များ - သတင်း
Love Island အပါအ ၀ င်ပြပွဲတွေတလျှောက်မှာ၊ ငါဟာနာမည်ကြီးတစ်ယောက်ပါ၊ Me Me နှင့်အတူညစာစားမည်၊ UK ရုပ်မြင်သံကြားကကျွန်တော်တို့ကိုအထင်ကရအခိုက်အတန့်လေးများပေးထားပါသည်။ တကယ်တော့ဒီတော့အထင်ကြီးစရာကောင်းတာကသူတို့ဟာသူတို့ဟာနေ့စဉ်ဘ ၀ ထဲကိုမသိမသာထည့်သွင်းထားတာကြောင့် Gemma Collins ဟာမမျှော်လင့်ဘဲသင့်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကိုးကားနေတယ်။ ဤတွင်မကြာသေးမီကသမိုင်းအတွက်အများဆုံးကိုးကားဗြိတိန်ရုပ်မြင်သံကြားအချိန်လေးတစ် roundup ပါပဲ။
anyone ငါ့ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကိုမုဒိန်းကျင့်စေချင်သလား။ စိတ်ကိုနည်းနည်းရုတ်သိမ်းပေးရန်? '
ဂျော်ဂျီယာသည် Kem ကိုဖြိုခွဲလိုက်သည်နှင့် Amber သည် Love Island ၏စီးရီး ၃ မှလာသည့်အထင်ရှားဆုံးကိုးကားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရစ်သာသိခဲ့လျှင်၎င်းသည်မည်မျှကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး၎င်းသည်မည်မျှကြီးကျယ်ပြီး ၅ မနက်တွင်ဤရိုးရှင်းသောကိုးကားချက်ဖြင့်အဆုံးသတ်သွားသည်ကိုသိရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
'ငါ Darren claustrophobic!'
frazzled ဆံပင်အကြားအပေါင်းတို့နှင့် game'd ထွက်ဖြစ်ခြင်းအကြား, Gemma Collins ကအမှန်တကယ်ပေးခြင်းအပေါ်စောင့်ရှောက်သောဆုကြေးဇူးကိုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤကြီးမားသော Big Brother အခိုက်အတန့်၌ကိတ်မုန့်ကိုယူသည်။
'ချစ်လှစွာသောသခင်၊ ဂျိန်း၊ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဘဝ'
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်လွန်ခဲ့သော ၁၂ နှစ်ကရုပ်မြင်သံကြားမှထုတ်လွှင့်ပြသခြင်းရှိသော်လည်း Come Dine with Me မှနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောမြင်ကွင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်အမြဲတမ်းငှားရမ်းခမဲ့နေပြီးရှင်းပြစရာများစွာမလိုအပ်ပါ။ ဂျိန်းကဒီထိုက်တန်ရန်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ သူမသည်သူမနှင့်ဆုကြေးငွေကိုစဉ်းစားနေဆဲဖြစ်ပြီးသူမသည်ကျေးဇူးတော်နှင့်အလှတရားအတွက်သင်ခန်းစာအချို့ကိုအသုံးချပြီးအဆုံးသတ်မလိုက်သည်ကိုစဉ်းစားနေသည်။
'' သင်မဟုတ်, နောက်နေပါတယ် နောက်တစ်ခု တစ်ခုလား? '
A.k.a. လက်ရှိအခြား lockdown အတွက်ဖြစ်ခြင်းမှလူတိုင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံအစည် Bristol ကနေ Brenda နှင့် 2017 ခုနှစ်တွင်အခြားအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများအတွက် Theresa မေလရဲ့ခေါ်ဆိုမှုမှသူမ၏တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူရှိကျနော်တို့သူမကအဆင်ပြေလုပ်နေရဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးအတွက် Made အပေါ်သူမ၏လိမ်လည်မှုအရှုပ်တော်ပုံအောက်ပါငါတို့ Zara ရဲ့ပျက်ပြားမြင်ကြပါတယ်။ Zara ၏တုန့်ပြန်မှုကိုသင်တုန့်ပြန်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းအခြေအနေတိုင်း၌သက်ဆိုင်သည်။ သင့်၏အိမ်သူအိမ်သားကိုစပျစ်ဝိုင်နှစ်ပုလင်းတစ်ခွက်တိုက်ကျွေးရန်သင်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ၊ တနင်္လာနေ့ညနေခင်း၌ဘ ၀ အခြေအနေမကောင်းကြောင်းကိုမေ့ပျောက်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်သင်၏အွန်လိုင်းကို Zoom မနက် ၉ နာရီတွင် ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းလား နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ။ ဤအရာကိုသင်ပုံမှန်မကိုးကားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်လိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျနော်တို့မေီနှင့် Curtis '' ခဏတာဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုမေ့လျော့ပြီလော နီးပါး။ နံနက်ယံ၌မေီအား cuddle မပေးဘို့ Curtis '' ရှင်းပြချက်အပြီးပေါ်ထွက်လာသောတွစ်တာမှတ်စုများကိုအစဉ်ငါတို့မေ့လျော့တော်မူမည်လော ဘယ်တော့မှမ
Tiffany Pollard သည် David Gest ကွယ်လွန်သွားပြီဟုမှားယွင်းစွာတွေးထင်မိခြင်းမှာနောက်ထပ်သမိုင်းဝင် Big Brother အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြား၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ Tiffany သူမ၏တုံ့ပြန်မှုများအတွက် BAFTA မခံမယူအံ့အားသင့်ပါတယ်။ မင်းဒါဝိဒ်ကိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေပြီလို့မင်းကိုပြောလိုက်တယ် သူကအိပ်ပျော်ရှိသေး၏။
ညံ့ဖျင်းသော Hadiqa, 2013 ခုနှစ်တွင် Yorkshire ပညာရေး၏ဤကလစ်ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်သူမကအဆင်ပြေပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါဟာရှစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါတို့နေဆဲမည်သူမျှ Safiyyah သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ဘာမှဖြစ်အတင်းနိုင်အောင်မေ့လျော့ကြပြီမဟုတ် ယူကေမှာယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးလို့ဘယ်သူပြောခဲ့လဲ။ ဤကလစ်မဟုတ်ရင်ထေူ၏။
'သူမဘယ်သူလဲ? မင်းဘယ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တာလဲ။ '
Big Brother ၏စီးရီးခုနှစ်ခုကိုအမှန်တကယ်သတ်မှတ်ထားသော Nikki ၏မမေ့နိုင်သောဝုန်းဒိုင်းကြဲအချိန်လေးအနည်းဆုံးတစ်ခုကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲဤသည်ပြည့်စုံမှုမရှိပါ။ Nikki Grahame က Big Brother ကိုသူမ၏အသက်ကိုကယ်တင်ခြင်းအတွက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး၊ သူမအိမ်၌ရှိစဉ်ကာလအတွင်းသူမအားပေးခဲ့သည့်များပြားလှသောအခိုက်အတန့်များ၏အခွင့်အလမ်းများကိုသူမငါတို့အားလုံးပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုပြောခြင်းသည်ဘေးကင်းပါသည်။
နောက်ဆုံး Holly မှ Gino ၏တုံ့ပြန်မှုသည်သူ၏ခေါက်ဆွဲပန်းကန်ကို British Carbonara ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်ကျနော်တို့ဒီတစ်ခုမေ့လျော့လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့သလား
• ဤသည် Celebs Go ချိန်းတွေ့၏သွန်းဘယ်လောက်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်
• Bling Empire နှင့်ပတ်သက်သောဤ ၃၇ မှတ်သည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ၎င်းတို့သည်ဘီလီယံနှင့်ချီ။ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်